Ezumike ụgbọ mmiri - Kedu ebe kacha ewu ewu? | Njem zuru oke
Ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe ụgbọ elu yana ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ oloko, ọ nweghị ihe dị ka ịkụ nzọ n'otu n'ime ụzọ njem pụrụ iche. Oge ezumike ụgbọ mmiri bụ otu n'ime echiche ndị ahụ ị ga -emerịrị opekata mpe na ndụ gị. Ọ nwere ike ịbụ njem ihunanya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ ezinụlọ, dabere na mkpa nke onye ọ bụla, mana n'ọnọdụ abụọ atụmanya nke nrọ anyị ga -emezu. Ọ́ gaghị amasị gị ime ka ha mezuo?
Ọ bụ ya mere na mgbe oge ọrịa a niile gasịrị, anyị ga -eme ememme ịlaghachi azụ n'ụdị. Jiri akọ ee, mana imezu nrọ ndị ahụ anyị kpọtụrụ aha na nke zoro ogologo oge. Anyị na -agwa unu niile uru nke njem dị otú ahụ na ebe ọkacha mmasị ka aga eleta.
1 Greece: Otu n'ime ebe ndị njem na -aga
2 Gịnị mere ị ga -eji gaa ụgbọ mmiri?
3 Ezumike ụgbọ mmiri, mgbe ị ga -ede akwụkwọ?
4 Kedu ihe m kwesịrị ime njem ụgbọ mmiri Mediterenian
Greece: Otu n'ime ebe ndị njem na -aga
Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike ikwu maka ọtụtụ ebe n'ụdị ezumike njem ụgbọ mmiri, agwaetiti Greek bụ otu ọkacha mmasị. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị banyela ebe ahụ, n'ihi na ekele maka ụzọ njem a, ị ga -achọpụta ya n'ụzọ pụrụ iche. Mediterenian bụ ihe ịchọ mma mgbe niile ịchọpụta yana dị ka nke a, Gris bụ okwute ya kacha egbuke egbuke.. na ụgbọ mmiri Gris Ọ bụ otu n'ime ihe kacha ahọrọ n'ihi na mpaghara a nwere akụ nke ihe mgbe ochie, si otú a na -ahapụrụ anyị ọdịdị ala nke a ga -egosi na retina anyị.
Ma ọ bụghị naanị ya mana nkwụsị na Atens na Acropolis ga -abụ ihe ọzọ dị mkpa, na -echefughị ​​Crete, ebe ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri abụọ maka ụgbọ mmiri. N'ebe ahụ ị nwere ike ịga na Obí nke Knossos, nke ga -ejukwa gị anya na foduru ya na isi ihe nke mmepe anya ndị Gris. N'ezie ị nụla maka Mykonos maka osimiri ya. N'ihi ya, ọ bụ mpaghara ọzọ ahọpụtara mgbe ị na -akwụsị njem gị. Ka o mechie na Santorini na ọdịda anyanwụ ya ama ama. Ugbu a ị ga -aghọta ntakịrị ihe kpatara Gris na Mediterenian ji bụrụ otu n'ime ebe ndị isi na -aga!
Gịnị mere ị ga -eji gaa ụgbọ mmiri?
Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị ka ajụjụ anyị maara ka esi aza, anyị ga -enye gị ihe kpatara ị ga -eji debe ndoputa gị. Anyị doro anya na ụgbọ mmiri Ọ ga -akpọga anyị ebe anaghị adị mfe mgbe niile iji ụzọ njem ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ịbụ ihe ị na -anaghị eme mgbe niile, ị ga -ebi ya nke ukwuu. Malite na ọ bụ ahụmịhe ọhụrụ na ihe okike, ị ga -enwe nhọrọ nke ịrụ ọrụ dị iche iche mana ahapụghị otu ebe. N'ihi na n'ụgbọ mmiri ị ga -ahụ ihe omume ụbọchị, egwuregwu, ntụrụndụ, oge ezumike na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Emebere ihe niile ka ị nwee ọ enjoyụ ọnụnọ gị!
Ezumike ụgbọ mmiri, mgbe ị ga -ede akwụkwọ?
Ihe kachasị mma bụ na, dịka njem ọ bụla bara uru nnu ya, ọ kacha mma ịme ndoputa ozugbo enwere ike. Ọganiihu bụ ihe niile ka ị nwee ike ịhazi nke ọma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ntakịrị, ọ nweghị ihe dị mma karịa emeghị ya n'oge dị elu wee chere ruo Septemba ka ịchọta ya. Ebe ọ bụ na mgbakwunye, ọnọdụ okpomọkụ maka isi ihe ụfọdụ ị ga -eleta ga -adị n'ime oke ọnụ ka ị wee nwee ọ enjoyụ njem ọ bụla nke ọma. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na n'ime afọ niile ị nwere ike mee ndoputa gị dabere na mkpa gị. Ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ị na -eme njem dị ka ezinụlọ, ị ga -achọkwu oghere yana ọ kacha mma ka ị ga n'ihu tupu oche gị agwụ. Cheta na a ga -enwe onyinye mgbe niile ị nwere ike irite uru na ịchekwa oke tuo.
Kedu ihe m kwesịrị ime njem ụgbọ mmiri Mediterenian
Ozugbo ị họrọla ma debe njem gị yana ya ụbọchị ị ga -eji mee njem ezumike gị, obi abụọ na -ebilite, maka na ịgabeghị njem n'ụgbọ njem a. Ma echegbula n'ihi na ọ dịghị ihe dị iche na ndị ọzọ ị maara. Ihe dị mkpa bụ ka ị zuru ike ma nwee ọ ofụ zuru oke maka na ụgbọ mmiri nwere ihe niile ịchọrọ maka ya. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na okenye ihe ị nwere ike ime bụ were uwe abụọ ka ọ dịrị gị mma n'ehihie yana ị nwekwuo oge maka abalị. Nke a bu n'obi ịbanye n'ụgbọ.
Mana mgbe anyị na -eme nkwụsị nke anyị chọrọ ịnụ ụtọ ya, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ka ị wepụta ụdị nke kachasị dị jụụ na nke nkịtị. Ya mere, anyị ga -eyiri akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị na uwe ahụ dịkwa mma. Maka ụdị njem a, cheta iburu obere akpa na ihe ndị bụ isi, gbakwunyere karama mmiri na nchekwa anyanwụ. Buru n'uche na n'ebe ụfọdụ ị ga -eleta, ha anaghị ekwe ka eji akwa dị mkpụmkpụ banye na ọ bụ ihe ị ga -eburu n'uche. N'ezie ugbu a ị ga -edo anya maka ebe ị na -aga, ụzọ njem gị na nnukwu ezumike gị na -eche gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ezumike ụgbọ mmiri: mee ka nrọ gị niile mezuo!
Roomgba alụ nwanyị ọhụrụ na nlekọta ahụ ike na Gris oge ochie